I-Contemporary Bungalow In Peaceful Coconut Grove
Khuekkhak, Phang-nga, i-Thailand
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Karl - Lake View Bungalows
Indawo yethu yokuhlala eco-friendly itholakala endaweni ecezile kakhukhunathi engu-11,000 m2. Uhambo lwemizuzu eyishumi ukusuka ogwini oluhle lwaseKhuk-Khak.
Indawo yokuhlala inegumbi eliphindwe kabili esitezi esiphezulu sendlu yethu esezingeni lesihlahla. Indlu yezinga lesihlahla yakhiwe ngezinga eliphezulu futhi ivumelana nemvelo ngangokunokwenzeka. Ukubuka okuvela phezulu kuyamangaza!
I-Lake View engakahleleki inikezela ngezindlu zikanokusho nama-bungalows phakathi kwezitshalo eziluhlaza ezishisayo.
Sinikeza i-WiFi yejubane eliphezulu yamahhala futhi sinendawo yokudlela yethu.
Igumbi lifakwe amanetha esimanje omiyane.
Esitezi sesi-2 kukhona ithala elikhulu.
Le ndawo iwuhambo lwemizuzu eyi-11 ukusuka ogwini.
Itholakala esifundeni sase-Khuk Khak Beach e-Khao Lak, i-Lake View Bungalows inikeza ithala elipholile. Isikhumbuzo se-tsunami "i-Rue Tor 813" iqhele ngamakhilomitha angu-5 ngetekisi, isikuta, i-tuk-tuk.
Endaweni yokudlela ephethwe umndeni sipheka kuphela umkhiqizo omusha ovela emakethe!
4.87 ·25 okushiwo abanye
4.87 · 25 okushiwo abanye
ILake View Bungalows iyindawo ekahle yokuqala endaweni yase-Khao Lak enamathuba amaningi okuhlola imvelo yasendaweni nezinto ezikhangayo.
Eduze kwendawo yokuhlala kukhona ulwandle, isikhungo se-Khao Lak, i-Bang Niang, i-Pakarang ne-Khuk Kak, kanye nezimpophoma zemvelo. Ukusefa, igalofu, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo - zonke izinhlobo zemisebenzi zingenzeka!
Ungakwazi ukuhlanganyela emisebenzini ehlukahlukene, njengokugibela amahhashi, i-snorkeling kanye ne-Windsurfing. Ukutshuza nokuqwala izintaba nakho kudumile endaweni. I-resort inikeza ukuqashwa kwamabhayisikili. ILake View Bungalows ingamakhilomitha ayi-16 ukusuka eTublamu Jetty kanye no-1.5 km ukusuka e-PTT Station eKhao Lak. Isikhumulo sezindiza esiseduze yiPhuket International Airport, 67 km ukusuka endaweni.
Uma nje ufuna ukuphumula futhi uzivumele uhambe, ziphathe nge-massage yase-Thai noma vakashela i-spa. Sibheke phambili ekubuzeni kwakho futhi sizokuthokozela ukuncoma izeluleko ezinhle kakhulu esizeni.
Yebo, sizokwazisa ngenjabulo mayelana nezinketho ezinhle kakhulu nganoma yisiphi isikhathi; noma ukuthenga izinto eziyisikhumbuzo, ukuthola ulwandle oluhlanzekile noma indawo yokudlela yasendaweni ebukekayo. Sifuna uzizwe ukhululekile uma unathi futhi uchithe izinsuku ezingenakulibaleka futhi mhlawumbe uhlele iholide lakho elilandelayo nathi.
Qasha isikuta noma ibhayisikili ukuze uzihlolele indawo ezungezile.
Ungaphinda ubhukhe ukuvakasha kosuku nathi. Isibonelo, ku-National Park ye-Khao Sok, i-Khao Lak, i-LamRu. Uhambo lwasehlathini, ukugibela izindlovu, i-kayaking, ukutshuza emanzini kanye nohambo lwesikebhe ukuya "e-Similan" kanye neChibi lase-Kao Sok nakho kungenzeka. Futhi ipharadesi for anglers.
Ukusuka e-Khao Lak maduze uzofinyelela "eziQhingini zaseSimilan" ezidume kabi ngamathuba asezingeni lomhlaba wokuntywila kanye namathuba okubhukuda nge-snorkeling. Ungabhukha izinkambo zosuku noma izinkambo zezinsuku eziningi lapho ngqo esizeni.
Ibungazwe ngu-Karl - Lake View Bungalows
U-Karl nomndeni wakhe bathanda ukusebenzelana nezivakashi futhi bazisize zithole okungcono kakhulu ngokuhlala kwazo, ngokubanikeza iseluleko esingcono kakhulu esisekelwe okuhlangenwe nakho kweminyaka eyishumi njengababungazi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Khuekkhak namaphethelo